रात औंसीको, गीत उज्यालोको ? « Jana Aastha News Online
रात औंसीको, गीत उज्यालोको ?
प्रकाशित मिति : १९ जेष्ठ २०७४, शुक्रबार १७:१७
एउटा जंगलमा विभिन्न जातका प्राणीको बसोबास रहेछ । उनीहरूबीच अगाध प्रेम थियो । तिनीहरूको प्रेममाथि डाहा गरेर कसैले जंगलमा आगो लगाइदिएछ । जंगलका सबै जनावर आत्तिएर नजिकैको अर्को जंगलमा शरण लिन गएछन् । तर, एउटा सानो चरा भने निडरपूर्वक कुवा नजिकैको खाल्डोबाट पानी ल्याउँदै माथिबाट पानी चुहाएर आगो निभाउने कोसिस गर्दै रहेछ । तर अरू जनावरले उसलाई भनेछन्, ‘हे मूर्ख चरा तेरो चुच्चोमा ल्याएको पानीले जंगलको आगो निभ्दैन, बरु तँ उल्टै जलेर मर्न बेर छैन ।’ मुखभरिको जवाफ दिँदै त्यो चराले साहससाथ भनेछ, ‘तिमीहरू सबै डरछेरुवा हौ, तिमीहरूलाई केवल आफ्नो प्राणको चिन्ता छ । म इतिहासमा मरेर पनि अमर रहनेछु । किनकि मैले त कोसिस गरेँ नि !’
देशका ठूला दल कांग्रेस, एमाले र माओवादीले स्थानीय निकायमा जितेर पनि हारेका छन् । न तिनीहरू व्यक्ति फेरिए, न चरित्र फेरियो । मतदाता पनि उस्तै देखिए । फेसबुकमा क्रान्ति उराले तर भोट तिनै गाली गरिने जनमाथि खन्याए । अमेरिकाजस्तो देशमा घरजग्गा कारोबारी डोनाल्ड ट्रम्प सारथि भए । छिमेकी भारतमा केजरीवाल, अन्ना हजारे, योगी आदित्यनाथजस्ता पात्र सतहमा आए । चीनमा त झन् दुई बीस हाराहारी उमेरकाहरू कार्यकारी तहमा पुगिसके । २१ वर्षकी रञ्जु दर्शनाले अंक गणितमा हारे पनि राजनीतिमा जितेको भन्दै पूmलमाला ग्रहण गर्दा परिपक्वता, राजनीति र उमेरका विद्यावारिधि बाबुराम भट्टराई पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेनन् । केपी ओलीलाई स्थानीय तहमा आफ्नो दल पहिलो भएकोमा खुसी लागेन बरु कांग्रेस दोस्रो कसरी भयो भनेर मनलाई मरिच बनाउनेतर्पm केन्द्रित भए । शेरबहादुर देउवालाई पार्टी डुबेको भन्दा प्रचण्डपुत्रीको कल्याण नहोला भन्ने चिन्ताले खग्रास बनायो । आर्थिक लाभांशको सेयर र राजनीतिको मेयर दुवै खोज्दा नेता झन्झन् नांगिदै गए । चण्डमुण्ड, हुक्के, ढोके, नन्दीभृंगीले बचाएको लाजले कति दिन धान्नु ?
डाक्टरहरू कलपुर्जा सफा गरेजस्तै गरी मानव शरीरको शल्यक्रिया गर्छन् । विभिन्न रोगको नाममा उब्जिएका ट्युमर काटेर मिल्काउँछन् । मस्तिष्क, मुटु, फोक्सो, मिर्गाैलाका जटिल उपचार गर्छन् । खै, तिनीहरूले मानिसभित्रको लोभ, ईष्र्या, रिस, प्रतिशोधचाहिँ किन मिल्काउन नसकेका होलान् ? ती वस्तु हुन्छन् चाहिँ कहाँ ? नेपालमा अब बेथितिको उपचार इतिहास हैन, शल्यक्रियाबाट खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ । मलेसियाको कायापलट गर्ने मुहम्मद महाथिर, सिंगापुर बनाउने लिक्वान, विहारलाई दोहोरो अंकको आर्थिक विकासमा पु¥याउने नितिशकुमार आएर हाम्रा मुखियालाई प्रवचन दिए पनि केही फरक पर्दैन । यस्ता व्यक्तित्वसँग बसेर एकाधवटा कुम जोडेर फोटो खिच्नेभन्दा दोस्रो कर्म उनीहरूले जानेकै छैन । हामी पछि परेको नजानेर, नबुझेर, नदेखेर नभई नियत नै खोटो भएर हो ।
सरकारको नीति कार्यक्रमभन्दा कपिलको कमेडीको भाउ छ । बब मार्लिनको लट्टे कपाल विक्छ । राखी सावन्तको छिल्लिएको मादक नखरा विक्छ । नेपालमा मानिसको भिजन हैन, पोर्नस्टार सन्नी लियोनको अद्र्धनग्न जवानी बिक्छ । अझ विश्वबाट काम नलाग्ने भनी मिल्काइएको माओ डक्टिन भित्तामा पु¥याइँदा पनि अभैm टालाटुली बटुलीका शैलीमा तानतुन पारेर राजनीतिक भोटो सिउने प्रयास गरिन्छ । यसरी क्रान्तिका नाममा रोपिएका धतुरोबाट धानको अपेक्षा गरिन्छ । अनि धान नफल्दा पुर्पुरोलाई धिकार्ने काम हुन्छ । विकास बादले नभई इच्छाशक्तिले हुन्छ भन्ने नर्सरी बालकले बुझेको सत्य तिनका हजुरबा पुस्ताको मथिंगलमा पसेको छैन । जीवनको पूर्वाद्र्धलाई उपेक्षा गरियो भने उत्तराद्र्धमा पुगेर बुझेको सत्य काम लाग्दैन । भूपि शेरचनको कविताले अरूलाई मिठास दियो । तर, जीवनको उत्तराद्र्धमा उनले निष्कर्ष निकाले– आपूmलाई दुईवटा क ले बिगारे । जसको अर्थ थियो– कविता र कम्युनिस्ट । जीवनभर नास्तिकवादमा कलम चलाउने लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाले ब्रह्मनालमा पुगेपछि भने– ‘आखिर श्रीकृष्ण रहेछ एक ।’ विश्व राजनीतिमा निरंकुशताको सजीव पात्र सम्झिइने हिटलर कालिदासको शाकुन्तल महाकाव्यका प्रशंसक मात्र भएनन्, आर्य संस्कृतिको प्रतिरक्षा गरे । त्यसैले राजनीतिका नाममा मनमा एकथोक, बोलाइ अर्को र गराइ तेस्रो खाले संस्कृति नत्यागेसम्म हाम्रा लागि राजनीति सेवा हैन, धोकाको अर्को नाम हुने निश्चित छ ।
कुनै एक सैनिक युद्धमा थियो । घरबाट श्रीमतीको चिठी आयो । चिठीमा लेखिएको थियो–‘यस गाउँमा सभ्य र स्वस्थ मानिस नहुँदा खेतमा मैले नै हलो जोत्नुपरेको छ ।’ चलाख सैनिकले जवाफ पठायो– ‘खेतमा हलो नचलाउनु, त्यहाँ विस्फोटक पदार्थ गाडिएको छ ।’ उसको पत्र सेन्सर भयो । अब के थियो र, आधुनिक औजारसहितको सैनिक टोली त्यस बाँझो खेतमा पुगेर चारैतिर खन्यो । यस कुराको जानकारी श्रीमतीले श्रीमान्लाई गराइन् । अर्को पत्रमा सैनिकले लेख्यो– ‘अब सबै खेतमा मजाले गहुँ छर्नू ।’
क्रान्तिका नाममा जिन्दगीभर बन्दुक र बारुदको धतुरो रोपेका प्रचण्डले साठीको सेरोफेरोमा नाघेपछि गरेको धान फलाउने रहर माथिकै सिपाहीको चलाखीभन्दा पर नदेखिने पक्का छ । सर्वहारा हैन, सर्वआहारा अनि दाँती मिलेका घर भएका धनाढ्यहरू यो पार्टीको चुल्हो चौकोमा पुगेपछि रगत र पानीको भेद अन्त्य भएको छ । धनयुद्धको राप र तापमा टिक्न नसकेर जनयुद्धका महिषीहरूको हातमा पश्चात्तापसिवाय अरू केही हात लागेन । माओवादी नेतृत्वले जब सहरी नूनसंग बढी सम्झौता गर्न थाल्यो, उभित्रको रातो रंग खरानी बन्दै गयो ।
पुरुषको सफलता पछाडि महिलाको हात हुन्छ । यो सुल्टो व्याख्या भयो । तर, उसको असफलता पछाडि महिलाको हात हुन्छ हुँदैन ? यो पेचिलो प्रश्नको उत्तर त्यति सहज छैन । वर्तमान मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरणमा उनीहरू सुनपति देखिनुको मनोविज्ञान पनि यसैसंग जोडिएको छ । धन त आउँछ पनि जान्छ पनि । धन गएर मानिस बिगँ्रदैन तर चरित्र गयो भने मरेको म¥यै हुन्छ । विश्वका राजनेताले बद्नामीबाट बच्न पारिवारिक बन्धन चुँडाल्ने हिम्मत गरेका छन् । उनीहरूले राजनीतिको अम्लेठ खान खोजे तर अण्डाको माया गरेनन् । पतिको शारीरिक कुरूपताप्रति तीव्र वितृष्णा भाव राख्ने मेरी टोड लिंकन कर्कश स्वभावकी थिइन् । विलासी जीवनको चाहना राख्थिन् । यसविपरीत अब्राहम लिंकन शान्त, सादा, सरल र विनयी थिए । कतिसम्म भने स्प्रिङ फिल्डमा रहँदा उनले लिंकनको मुखमा तातो कफी मिल्काइदिएकी थिइन् ।
संसारको कुनै पनि मनुष्यले आफ्नो दाम्पत्य जीवन पीडादायी र कष्टकर बनोस् भनेर चाहेको हुँदैन । समाजका सामान्य मानिस मात्र होइन, ख्यातिप्राप्त महामानवहरूको सोचाइ पनि यस्तै हुन्छ । तर, शक्ति र सत्ताको राजकीय मर्यादाका कारण यी महान् दम्पतीको पारिवारिक जीवन सदैव विषादपूर्ण रह्यो । भारतीय स्वतन्त्र संग्रामका महारथी महात्मा गान्धी श्रीमती कस्तुरबा गान्धीलाई एक सय चार ज्वरो आउँदा पनि वास्ता गर्दैनथे । विश्वविख्यात राजनेता मण्डेला जब सत्ताको सम्प्रभुताको सिंहासनमा बस्न पुगे दुःखका दुष्कर यात्रामा साथ दिने पत्नी बिन्नीलाई त्याग नगरी धर पाएनन् । लोकतन्त्रको मातृभूमि मानिने बेलायती युवराज चाल्र्स र डायना परस्परमा छिन्नभिन्न हुनुप¥यो । माओ त्सेतुङ व्यक्तिगत हैसियतमा अत्यन्त खर्च कम गर्थे । पुरानो कोट र खुइलिएको कमिज नफाटुन्जेल लगाउँथे । १९५८ तिर चिया र मासु महँगो ठानेर खानै छोडिदिए । तर, श्रीमती बटुल्ने र सन्तान जन्माउनेमा यिनी लापर्वाह थिए । ४८ वर्षको उमेरमा २३ वर्ष कान्छी ज्वाङसँग चौथो घरजम गरे ।
उनको विलासी व्यवहार सम्झिनेहरू अहिले पनि नाक खुम्च्याउँछन् । आफ्नो परस्त्रीप्रतिको रुचिमा सुशीलाको गुनासो रहने गरेको स्वयं बिपीले उल्लेख गरेका छन् । अरू त अरू हरे कीर्तनमा लागेकी श्रीमतीको व्यवहारबाट जीवनको उत्तराद्र्धमा देशको मन्त्री भइसकेका लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा आजित थिए । त्यसबेलाका धर्मगुरु कविप्रसाद गौतममाथि धर्मको आडमा समाज भाँडेको आरोप थियो । धर्म आवरणमा उनी महिलालाई जुठो ख्वाउने, खुट्टा ढोगाउने, खुट्टा धुन लगाएर पानी ख्वाउनेजस्ता काम गर्थे । एकातिर रोगी देवकोटा उपचार खर्च नपाएर थलिएका थिए भने अर्कातिर देवकोटा पत्नी मनदेवीमा यस्तो धार्मिक भूत चढेको थियो कि उनी लोग्नेको आँखा छलेर दहीको कतारोभित्र चाँदीको मोहोर लुकाएर गुरु पोस्ने गर्थिन् । समाजमा अपराध बढेपछि गेरुवस्त्रधारीको व्यापार पनि स्वतः बढ्छ । समय फेरियो, पात्र फेरियो तर शैली र प्रवृत्ति अहिले पनि उस्तै छ । जताततै कर्मवादीभन्दा भाग्यवादीको उपस्थिति सघन बन्दै गएको छ ।
बुद्ध, एरिस्टोटल प्लेटो कसैको बाद थिएन, समूह थिएन, झन्डा थिएन । तर, विचारका लागि सधैं बाँचेका छन् । पूज्य छन् । धृतराष्ट्रले दुर्योधनको दुर्गुण, अहंकार र स्वार्थबारे पूर्ण जानकारी राख्दा राख्दै पनि मोह त्याग्न नसक्दा महाभारतको युद्ध भई सुखद सपना दुःखद घटनामा अवसान भयो । महाभारत सकिए पनि आखिर आँसुको कथा सकिएन । पाण्डवहरू जितेर पनि हारे । राजनीतिमा नैतिक बल गुमेपछि नेताको अवस्था भनेको रोबर्ट मान्छेको बचाइ मात्र हो । सर्वहाराको शासन, गरिबको सत्ता, जनवाद यी सबै पण्डित र धामीका मन्त्रजस्तै हुन् ।
गुजुल्टिएको चाउचाउ सिधा होला तर यी शब्दको अर्थ बुझ्न कठिन छ । हरेक शास्त्र हुने र नहुनेबीचको लडाइँमा केन्द्रित छ । हुनेले नहुनेलाई थोरै मात्र मन फुकाएर दिने हो भने समस्याको गाँठो आपैंm फुक्छ । तर, यही रसायन नमिलेकै कारण महाभारतका शृंखला कहिल्यै सकिएनन् । यदि, संसारमा सर्वहाराको राज्य हुन्छ भने नेपालका कम्युनिस्टले आदर्श नेता परिवर्तन गरी दिगम्बर रूपधारी महादेवलाई स्थापित गर्नुपर्छ । फगतः खरानी र बाघको छालामा रमाएका महादेवजस्ता विन्दास पात्र सायदै राजनीतिमा पाइएलान् । सधैंका मस्तराम महादेवको परिवार पार्वतीको भरोसामा चलेको थियो । उनीहरूको परिवारभित्रको अन्तद्र्वन्द्व कुनै पनि भौतिकवादी, माक्र्सवादी चिन्तनभन्दा लाखौं गुना बढी चाखलाग्दो थियो । पिताको बाहन सर्पबाट मुसो बचाउन गणेशले गर्नुपर्ने भगीरथ प्रयास, अनि कुमारको मयूरबाट सर्प बचाउन पिता महादेवलाई पर्ने धौधौ थोरै सास्तीपूर्ण थियो होला र ? आत्मरक्षाको द्वन्द्वमा फसेको परिवारको डुंगा पार्वतीको बुद्धिमतापूर्ण व्यवहार र महानताका कारण चलेको थियो । सम्भवतः राजनीतिमा पनि यस्तै त्राण दिने व्यक्तित्वको खाँचो छ । आँपको बोटमा महत्वपूर्ण आँपै हो तर आँप फल्न हाँगाबिँगा जरा सब चाहिएजस्तै राजनीतिका अंगलाई ध्वस्त पारेर निर्माणको भाषण गर्नु बनबास जानुअघि बन मास्नुजस्तै हो ।
व्यक्ति असफल हुन्छ, राजनीति असफल हुँदैन । नेता खोटो मोहोर हुन सक्छ, विचार खोटो हुँदैन । राम्रो विचार र सुन जति पुरानो भयो, उति चहकिलो हुन्छ । मानिसको लामो यात्रा ठूलो पहाडले होइन, जुत्तामा अड्किएको सानो ढुंगाले छेक्छ । समुद्रमा कति पानी छ भनेर तर्क–कुतर्क गर्नुको अर्थै छैन नि † बरु तपाईंको लोटीमा कति पानी अटाउँछ ? त्यो पो मुख्य सवाल हो । काठमाडौंका केही पात्र यति पुलपुलिएका र पाखण्डी छन् कि डाक्टरले भनिदिने हो भने तिनीहरू पानीसमेत साबुनले धोएर खान बेर लगाउँदैनन् । औंसीको रातमा उज्यालोको गीत गाउनु ती चिल्ला सुकिलाहरूको दिनचर्या हो । रगत चुस्न आउने लामखुट्टे त टाढैबाट टिं…..गर्दै थाहा दिएर आउँछ भने दुष्ट आत्मा भएका मान्छेले पनि आपूm बस्ने घर कालो रंगले पोतिदिए कमसेकम असल मानिसले गोता खानु पर्दैनथ्यो कि ? तर, यस्तै मान्छे बाघ, भालु नलाग्ने सहरमा आफ्नो घरलाई कोक्रोजस्तो छेकेर बस्छन् । अनि आपूmलाई नौनी डल्लो ठान्छन् । समाज नामको चिजले पनि प्याच्चै भनिदिन्छ– वाह, कमाल होस् त त्यस्तो ।